Naya Post Nepal | दोहोरी च्याम्पियनकी अस्मिता डल्लाकोटीले गीत गाउदा स्टुडियो मै च’ल्यो रु’वाबा’सि, ? (भिडियो सहित)
दोहोरी च्याम्पियनकी अस्मिता डल्लाकोटीले गीत गाउदा स्टुडियो मै च’ल्यो रु’वाबा’सि, ? (भिडियो सहित)
दोहोरी गीत संगीतका पछिल्लो समयमा सबैको मनमा बस्न-सफल गायिका मध्ये यी हुन् अस्मिता डल्लाकोटि, अस्मिताको गित संगीत को यात्रा दोहोरी बाटै सु’रुवात भयपनी उनलाई दोहोरी क्षत्रको अहि ले सम्मकै ठुलो रि’यालिटी सो दोहोरी च्या’म्पियनबाट अझै उनले धेरै द’र्शकको माया अनि साथ पाउन सफल भयाकी थीइन।
यो पनि,,संजा’ल को बढ्दो प्र’योग साथै लोक प्रियता ले कति लाई मो’डल बना’यो त कति लाई कला’कार । तिनै संजाल मध्ये टिक’ट क जो अहि’ले अत्या’धिक रुचा’इए को सं’जाल बने’ को छ ।
आ’फ्नो निखा’रिए को कला हरु छोटो समय मा धेरै देखाउन सक्नु नै टिक ’टक को खुबि हो । त्यहि सामा’जिक संजाल टिक’ टक मा अहि’ले स’म्झना शाहि (राउटेनि) एक’दमै भा”इरल भैर’हेकि छिन् ।
उमेर को हि”साब मा २० बर्ष ला’गेकि उन को गायन र बोलि अनि सु”न्दरता’को जो कोहि हामी फ्यान हौ । उनी उतिकै सा’लिन स्व भा’विकि छिन् र उन को सो’झोपन’ले झ’न उन लाई सबै को चासो को बि”षय बना’यो ।
प”छिल्लो समय सम्झना’सग टिक’टक बनाउने को जमा’त पनि सा ”नो भने छैन् । टिक’टक बनाउने क्रम मा नै यी युवक हरु”ले पनि उनि’सग बनाए’का मात्रै हुन् ।
साचै निन्द’निय र बिजोक अवस्था’मा छन् राउटे समु’दाय हरु अझै पनि । नत निश्चित छर छ नत खान को नै टु’ङ्गो छ नत उनि हरु लाई ज्ञान र सिप का कुरा हरु नै सिका’इन्छ ।उनि हरु पिछ’डिए को पिछ’डियै भए ।
आ’ज को यश शृङ्खला’मा तिनै सम्झ’ना शाहि का टिक’टक भिडि ’यो पेश गर्द छौ । एक दमै सुन्दरि उतिकै सह’नशील अनि मेधा’वि बोलाई’मा स्पष्ट वक्ता अनि उस्तै सुरि’लो स्वर ।
यी हुन रा’उटे समुदाय कि स’म्झना साहि । झल’क्क हेर्दा सा’यदै कसै ले राउटे भनेर आक’लन गर्दो हो । सा’यदै तपाईं हामि’ले यस्ति सुन्दरि रा’उटे कहि’ले देखे’का नै थियौ ।
हेर्दै दाग ला’ग्लिन जस्ति धप’क्क बले कि उस्तै सजि’ए कि अनि मी ठो स्वर भए कि यिनी नै पहि’लि हुनु’पर्छ जो राउटे नै होलि’न् भन्न पनि अस’हज जस्तै हैन अर्कै समु’दाय को ज’स्तो हो भन्दा कसै को मत बि’पक्ष मा आउ दैन ।
अहि’ले तिनै सम्झना’का टिक’टक भिडि’यो हरु एक’दमै धेरै भा’इ रल भैर हेको छ । सामा’जिक संजाल को एकद’मै प्रिय बनि’सके को टिक’टक को लोक प्रिय’ता सगै सम्झना लाई पनि टिक टक’ले ठाउँ दिए सगै उन का भिडि’यो हरु अहिले एक दमै भाइ’रल छन् ।
२०७८ फाल्गुन ५, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 513 Views